किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। यही महिनामात्रै पूर्वयुवराज पारस शाहका विभिन्न कमजोरी र गल्ती बाहिर आएका छन्। उनी सुध्रिन थालेको बताइए पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनले हर्कत देखाउन छाडेका छैनन्।
बाबु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव मनाउनका लागि नेपालगञ्ज जाँदै गर्दा उनको हर्कत देखिएको थियो।
शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत ‘बाबा’, पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहका छोरा गेरु बस्त्रधारी प्रभञ्जन सिंहसँगै बाबु ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव मनाउन नेपालगञ्जतिर लाग्ने क्रममा भैरहवामा देखिएका थिए उनी।
उनले नागरिक तथा पत्रकार भेटघाटका क्रममा सार्वजनिक कानुनको खिल्ली उडाए। अर्थात्, सार्वजनिक कार्यक्रममा चुरोटका तीन खिल्ली उडाए। कुलतबाट जीवनको लयमा फर्किरहेका र परिवारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन थालेका पारसको यो हर्कतले उनको आनीबानीका पूर्ण सुधार नआएको प्रस्ट देखाउँछ।
कपाल पालेका पारस रातो बस्त्रमा देखिएका थिए। साधुको भेषमा राजाको वकालत गर्दै हिँडेका पारस यस अघि धेरै पटक चरेश काण्डमा परिसकेका छन्। यहाँसम्मकी थाइल्यान्डमा उनी चरेश काण्डमै पक्राउ परेका कारण छुटाउन पत्नी हिमानी शाहसम्म पुगेकी थिइन् । अहिले हिमानी र पारसको सम्बन्ध सुधारोन्मुख बताइए पनि एक साथ बस्ने गरेका छैनन्।
राजतन्त्रको सक्रियता बढेका बेला विभिन्न उदण्डताका कारणले नै पारस आलोचित थिए । झैझगडा र लफडामा फँसिरहने पारस पछिललो पटक कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाका विवादीत बंगलादेशी ज्वाँई रुबेल चौधरीसँग चितवनमा भएको झगडाका कारण झनै विवादमा फँसेका थिए। जनप्रहार साप्ताहिक